Taksibe miasa eto an-drenivohitra Manodidina ny 1.000 ireo efa voaisa
Taorian�ny fanisana sy fitsirahana ireo fiarakaretsaka ara-dal�na eto an-drenivohitra dia miroso amin�ny fanisana ireo taksibe indray ankehitriny ny ivontoerana fitsirihana etsy Antsakaviro tantanan-dRasoloarivelo Pinout
. Raha ny fanazavany dia efa mahatratra 1.000 ankehitriny ireo taksibe nahefa ny adidiny, fe-potoana izay mbola haharitra herinandro maromaro ka tokony hohararaotin’ireo tsy nahavita. Tsy adinon’izy ireo ny mijery manokana ireo fiarakaretsaka tsy nahavita ny anjarany. Nambaran-dRasoloarivelo Pinout mantsy fa mbola afaka mandray izy ireo na dia mihoatra ny 6.000 aza ireo nanaovana fitsirihana sy nametahana ilay taksi soratra miloko mainty eo amin’ny valahiny. Tanjona ny hisorohana ny sazy mety hahazo ireny fiarakaretsaka ireny izay mety hiafara amin’ny fampidirana fourriere eny Anosipatrana mihitsy ary tsy maintsy handoavana lamandy vao afaka mivoaka miasa. Nomarihiny manokana moa fa tsy maintsy tonga eny Antsakaviro ilay fiara mandritra izany hitiliana ny momba azy rehetra manomboka amin’ny lokony ka hatrany amin’ny jiron’ny fiara mba hifanaraka amin’ny maha fiara fitateram-bahoaka na fiarakaretsaka ara-dalàna azy eto an-drenivohitra.